SEM | စီးပွားရေးသတင်းကို Global ဆောင်းပါးများ WebSite.WS | GVMG - ကမ္တာ့ Viral စျေးကွက်အုပ်စု
စီးပွားရေးသတင်းကို Global ဆောင်းပါးများ WebSite.WS > SEM
ပညာရေးဆိုင်ရာ Breaking Grounds သို့
မရင့်ကိုနေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာသစ်ကိုအသိပညာနှင့်အရင်းအမြစ်များနှင့်အတူအင်တာနက်ကိုရေကြီးခြင်းနှင့်အတူ, ဒါပေမဲ့ဒုတိယအခြေခံအားဖြင့်တစ်စက္ကန့်အပေါ်, အဘယ်ကြောင့်ကျွန်တော်စာသင်ခန်း၏ပိုကောင်းတဲ့ပညာရေးအပြင်ဘက်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေဖို့ကိုယျ့ကိုယျကိုကန့်သတ်ထားပါသည်?
အဆိုပါ P ကိုသင့်&, G Moms သူတို့ကနေထုတ်ဖော် “အဆိုပါယူရတွင်”?
မိတ်ဆွေတစ်ဦးသို့မဟုတ် Co-အလုပ်သမားသူမက likes ထုတ်ကုန်အကြောင်းကိုပြောပြသည့်အခါ, အမြိုးသမီးမြားလုပျအဖြစ်, သငျတို့သထို့နောက်လည်းဝယ်, သငျသညျသူမသင်ပြောပြမှပေးဆောင်ခဲ့ချင်ပါတယ်ကြောင်းနောက်မှထွက်တွေ့ရှိခဲ့လျှင်သင်မည်သို့ခံစားရမယ်လို့? မိန်းမတကာတို့ထက်အများစုမှာပုဂ္ဂလိကထုတ်ကုန်ဆွေးနွေးချက်စီးပွားဖြစ်မဟုတ်ပါဘူး. လူတို့တွင်, ဖြစ်စေ. TIVO စဉ်းစားပါ, iPod ကို, ရုပ်ရှင်သို့မဟုတ်စားသောက်ဆိုင် - သူတို့ချစ်သောကြောင့်လူတွေအချင်းချင်းသူတို့အားရည်ညွှန်း, သူတို့ကလုပ်ဖို့ပေးဆောင်ရမရသောကြောင့်,. သူတို့တစ်နည်းနည်းနဲ့လျော်ကြေးငွေရခဲ့ဘူးဆိုပါက, သငျတို့သနောက်ပိုင်းတွင်ထွက်ရှာတွေ့, သငျသညျကဲ့သို့ဖြစ်ရလိမ့်မယ် ...
ဝင်းရန်သင့် Propsal ပြီးတော့သင်က Plan ကိုစီစဉ်
အဆိုပြုချက်ကိုစီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းသင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အချိန်ရှိသည်ကြောင်းသေချာစေရန်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်, client ရဲ့လိုအပ်ချက်တစ်ခုကောင်းစွာသော်လည်းထွက်ဖြေရှင်းချက်ရေးပါနှင့်ထုတ်လုပ်ရန်. မှန်မှန်အဆိုပြုချက်စာဖြင့်ရေးသားခဲ့သူလူတိုင်းကိုသူတို့ပိုကောင်းစီစဉ်ထားခဲ့ကွောငျးရံဖန်ရံခါစေလိုကြောင်းသိရသည်, အစောပိုင်းကစတင်ခဲ့ခြင်းနှင့်အမျိုးမျိုးသောအခါသမယနှောင်းပိုင်းတွင်တစ်ဦးမကျေနပ်ကြနှင့်မပြီးဆုံးသေးသောအဆိုပြုချက်ကိုနှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ကြိုးစားနေတည်းခို. သေးငယ်တဲ့စီမံကိန်းများကိုအဖြစ်အဆိုပြုချက်စဉ်းစားကြည့်ပါ '' အစီအစဉ်တစ်ခုဖွံ့ဖြိုး. သငျသညျကိုဖုံးလွှမ်းရမယ်အားလုံးသက်ဆိုင်ရာကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်. စဉ်းစားပါ - ဘယ်လိုဖြည့်ဆည်းဖို့ ...
သင့်ရဲ့အလုပ်နှင့်မိသားစုသင်တို့ရှိသမျှသည်သင်၏အချိန်ကြာ? သူငယ်ချင်းများပိုမိုတွေ့မြင်ဖို့အချိန်ပေမယ့်အထဲကသွားကြဖို့အချိန်မ? ဒီတော့အဘယ်ကြောင့်ညနေခင်းမူရင်းအပန်းဖြေစုစည်းမရ ...
မူလစာမျက်နှာညီလာခံ မှစ. လုပ်ငန်းခွင်
လူအတော်များများဟာနေအိမ်ထဲကနေအလုပ်လုပ်နေမှသာစာရိုက်သို့မဟုတ်သူကိုအွန်လိုင်းကအခြားအမှုအရာလုပျနိုငျမှာကောင်းသောနေသောသူတို့အဘို့သည်ဟုမထင်. သို့သော်, လူတွေအမျိုးမျိုးတို့ကိုကိုက်ညီနိုင်မအလုပ်အကိုင်များလည်းရှိပါတယ်. အိမ်မှာစုဝေးမှုအလုပ်အကိုင်အခွင့်အထံမှအလုပ်အတွက်သင်စိတ်ဝင်စားစေခြင်းငှါ. ဤရွေ့ကားသင့်ကိုယ်ပိုင်အိမ်ရဲ့နှစ်သိမ့်ရာမှပြုမိကြသည်အလုပ်အကိုင်များများမှာ, အလွန်ကောင်းစွာသင်ကိုက်ညီစေခြင်းငှါ, အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ ...
Las Vegas မှ: သင့်ရဲ့အားလပ်ရက်ကိုသေချာဖို့ကိုဘယ်လိုစွန့်စားမှုများနှင့်ကန်၏အပြည့်အဝဖြစ်ပါသည်
သငျသညျဟိုတယ်များထွက်စစ်ဆေးနေခြင်းအားဖြင့်လေးရယ်မှ Las Vegas မှာပျော်မွေ့သေချာလေ့လာ, တောင်တက်, တမိသားစုလုံးအတွက်အပန်းဖြေခြင်းနှင့်ဖျော်ဖြေရေး.
ဗစ်တိုးရီးယား Ring ကိုကနေလာမယ့်အဆင့်အထိသင့်လက်ရှိကို virtual ဒေဝါလီခံလက်ထောက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းယူဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူ, က virtual ဒေဝါလီခံလက်ထောက်လယ်ကိုတီထွင်ခဲ့သူရှေ့နေအကူ.
အဘယ်သူမျှမထားတဲ့ကြော်ငြာ၏အောင်မြင်မှုကိုအများအားဖြင့်ခေါင်းစဉ်တည်ရှိသည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုရှိပါတယ်ငြင်းပယ်နေသည်. အဆိုပါခေါင်းစဉ်စာဖတ်သူကိုဆွဲဆောင်ခြင်းနှင့်သူ့ကိုကြော်ငြာ၏ကျန်ကိုဖတ်ရှုစေသင့်တယ်. အဆိုပါခေါင်းစဉ်ကြော်ငြာများအတွက်ခေါင်းစဉ်အပေါ်ဆုံးဖြတ်ခြင်းတဲ့အခါမှာအဓိကအချက် embedded ရပါမည်ရိုးရှင်းစွာမှတ်မိလွယ်တဲ့နှင့်အမျိုးမျိုးသောဖြစ်သင့်.
သငျသညျအစဉျအမွဲသငျသညျနောက်ဆုံးတော့ငွေရေးကြေးရေးအခမဲ့ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်တဲ့အွန်လိုင်းအလုပ်ရှိသည်ဖို့လိုခဲ့ဖူး? သင်သည်သင်၏သူဌေးအတူတက်ကျွေးမွေးနှင့်သင့်အလုပ်ထွက်ချင်နေကြတယ်? သင့်ရဲ့အဖြေကို '' ဟုတ်ကဲ့ '' အကယ်., သို့ဖြစ်လျှင်ဤဆောင်းပါးကိုသင်ရှာနေခဲ့ကြဖြေရှင်းနည်းရှိပါတယ်.
အနိမျ့ကိုယ်ရေးဖိုင်ရေကူးကန်ပူးတွဲချက်တွေသန့်ရှင်းခြင်းနှင့်ကို Safe ်ပူးသိမ်းဆည်းထားပါ
ဘယ်လိုသင့်ရဲ့စီးပွားရေးမိ Get ရန်
အသစ်စက်စက်. 10 လျှို့ဝှက်ပြီးတော့ထိရောက်သောစျေးကွက်မဟာဗျူဟာ
Marketing is one of the most important business factors. From my experience, I have just listed 10 effective marketing strategies that have helped my marketing development, and hope will help your business,လွန်း. ဒီမှာပါ 10 secret and effective marketing strategies. 1. Createadirectory of web sites onaspecific topic. Give people the option of adding the directory to their web site by linking to it. Put your business advertisement at the top of the director's home page. ...
3 Adsense အကြောင်းအရာဆိုဒ်များအတွက်မရှိမဖြစ်ပါပဲအဘယ်ကြောင့်အကြောင်းရင်းများ
Adsense သင့်ရဲ့ content တွေကိုဆိုက်များအတွက်မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်အဘယ်ကြောင့်သိရန်ဒီအလုပ်လုပ်တယ်ပထမဦးဆုံးပုံကိုသိရန်ဖြစ်ပါသည်
သည်သွားဘက်ဆိုင်ရာ Marketing ကိုမဟာဗျူဟာ 2006
မိုဘိုင်းစျေးကွက်: အဘယ်ကြောင့်ဒါဟာအလုပ်လုပ် & အကြှနျုပျ၏စျေးကွက်ဘတ်ဂျက်သည်အသေးစား. အဘယ်သို့ငါ၏အများစုမှာ Make နိုင်သလား?
Mobile marketing isatype of marketing that is done throughout the world. It incorporates the use of the mobile phone to provide information, advertisements and other types of promotion. There isagreat wealth of value in this type of product and service simply because of its ability to get right to the customer at the right time. By promoting in this manner, mobile marketing allows individuals to get just what they want when they need it. နှင့်, it allows businesses to reach their customers rig
ကွန်ယက်အဖွဲ့၏က Hidden ပါဝါ
ငါတို့ရှိသမျှသည်စျေးကွက်၏ရိုးရာပုံစံများအသုံးပြုခြင်းလုပ်ပေမယ့်ကွန်ရက်စျေးကွက်၏တဦးတည်းပုံစံအရာဖြစ်ပါသည်, အောက်မှာ-အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်. ဘယ်လောက်သေးငယ်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တွေကွန်ရက်၏တန်ခိုးကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်စတင်နေကြသည်ကြောင့်သူတို့ရဲ့အရောင်းအဘို့အဘယ်သို့ပြုနိုင်သည်ကိုလေ့လာပါ.
မူလစာမျက်နှာစီးပွားရေးမှာတစ်ဦးကသူ Work Up ကိုစတင်ခြင်းမပြုမီ-Do ရှိရမည်
သင့်ကိုယ်ပိုင်အိမ်ရဲ့နှစ်သိမ့်ထွက်ခွာခြင်းမရှိဘဲတစ်ဦးကျန်နေတဲ့ဝင်ငွေဝင်ငွေများ၏အတွေးကယ့်ကိုဆွဲဆောင်နှင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေပါတယ်. အဲဒီအိမ်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာအလုပ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသူများအတွက် ပို. ပို. လူတွေရှိပါတယ်ဘယ်ကြောင့်အဓိကအကြောင်းပြချက်င်. ဒါပေမယ့်အမှန်တရား, အိမ်မှာတိုးမှာအလုပျလုပျဖို့ပိုနှစ်သက်သူအရေအတွက်ကလူဦးနေစဉ်, အလုပ်-မှာ-အိမ်မှာအစီအစဉ်များလည်းကြီးထွားခြင်းနှင့်အလွယ်တကူကောင်းသောအခွင့်အလမ်းများကိုရှီယာ. သငျသညျအိမျပွစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာအလုပ်တက်ထားရန်ဆုံးဖြတ်ခင်မှာ, သငျသညျဖို့ရှိသည်အရာအများကြီးရှိပါသည် ...
ကားဂိုဒေါင်ရောင်းမည် – လျင်မြန်စွာငွေ Make ရန်တစ်ဦးကပျော်စရာ Way ကို
ကားဂိုဒေါင်ရောင်းချမလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းဖယ်ရှားပစ်ရမယ့်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်, ပေါင်းအချို့ငွေရှာ. လူတိုင်းအခြားလူများအဘို့အရှာဖွေနေနှင့်ဝယ်ယူရန်ဆန္ဒရှိနေကြသည်ဖြစ်ကြောင်းပစ္စည်းပစ္စယများ၏ကြင်နာစုဆောင်း. သငျသညျပစ္စည်းပစ္စယအမြောက်အမြားရှိပါကသင်တို့သည်နောက်တဖန်အသုံးပြုနိုင်သည်သို့မဟုတ်ချင်တယ်, တစ်ဦးကားဂိုဒေါင်ရောင်းချရှိခြင်းစဉ်းစားပါ. သင်အသုံးပြုဘယ်တော့မှပစ္စည်းများသိုလှောင်သွားစရာအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်. သင်တစ်ဦးကားဂိုဒေါင်ရောင်းချကိုင်ပြီးအားဖြင့်ကောင်းသောငွေရှာနိုင်ပါတယ်.
တစ်ဦး Freelance Proofreader ဖြစ်လာဖို့ကိုဘယ်လို
အလွတ်တန်း proofreading တစ်အလွန်အမင်းယှဉ်ပြိုင်အကွက်ဖြစ်၏ကတည်းက, သင်တစ်ဦးအလွတ်တန်း proofreader အဖြစ်အောင်မြင်နိုင်မည်ကိုဘယ်လိုရှာ.
အီးမေးလ် spam များကိုနှိမ်နင်းဖို့ကိုဘယ်လို
ကိုယ့်အကြောင်းကိုလူတိုင်းနေ့စဉ်နေ့တိုင်းသူတို့ရဲ့ Inbox ထဲတွင် unnessecary spam များကိုမက်ဆေ့ခ်ျများဖယ်ရှားခြင်း၏လုပ်ရတဲ့ကျင်းသွားသည်. ဤတွင်တတ်နိုင်သမျှရှည်လျားစင်ကြယ်အီးမေးလ်လိပ်စာရှိသည်ဖို့သင်ကူညီလိမ့်မည်ဟုအချို့သောခြေလှမ်းများဖြစ်ကြောင်း.
Freelance Copywriting ၏အနုပညာ
အရေးအသားသို့ရရှိရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းအလွတ်တန်း copywriting နှင့်အတူစတင်နိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာကောင်းတဲ့ပိုက်ဆံ-အလျှော့ပေးလိုက်လျောအလုပ်နဲ့ options အပြည့်အဝအချိန်ဝင်ငွေရစေမယ့်အလွတ်တန်း copywriter များအတွက်ပဒေသာဖြစ်ပါတယ်.
အရောင် Levels နဲ့အတူယှဉ်ပြိုင်ကစားဖျော်ဖြေမှု
According to the United States Small Business Administration, small businesses represent 99.7 percent of all employers. There are an estimated 22 million small and midsize businesses (SMBs) in the U.S. ယနေ့တွင်. Such companies are constantly challenged with the need to createahuge impact inanoisy marketplace withalimited budget.
ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တင်ပြမှုနှင့်အဆင့်နိမ့်ကုန်ကျစရိတ်ကို web site ကိုမြှင့်တင်ရေးရန်နှစ်ခုအခြေခံအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ကြသည်. စိတျအပိုငျးမြား၏နှစ်ဦးစလုံးသည်သင်၏ web site ကိုအတွက်တင်ပြသင့်ရဲ့ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများများအတွက် web site ကို '' ၏စျေးကွက်အပေါ်တူညီသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလူများရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဖမ်းပြီ.
ဥရောပ: သန့်စင်သောရပ်ကြီးအထက်တန်းလွှာနှင့်အိုင်ယာလန်သမ္မတဟောင်း Mary Robinson တွေ့ဆုံနေရာ
ကျွန်တော်တို့အများစုဟာမင်းသားတို့၏ပုံပြင်များကြားနာကြီးပြင်း, မင်းသမီးနှင့်ဘုရင်နဲ့မိဖုရား. ဤဆောင်းပါး၌, ငါသည်သင်တို့ကိုဤကဲ့သို့သောမူပိုင်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပုံကိုသင်ပြခြင်းနှင့်ပင်သူတို့နှင့်အတူအပြန်အလှန်လိမ့်မယ်.
သင်၏ပင်မ Sweet Home ကို AU ဂေါက် du jour
စီးပွားရေးလောကမှာရှိတဲ့ပြိုင်ပွဲကိုမကြာခဏအပျက်သဘောဆောင်သောအရာအဖြစ်ရှုမြင်နေသည်, ဒါပေမယ့်ဖြစ်ဖို့ရှိသည်ပါဘူး. ပြိုင်ပွဲကိုသင်အကြိုးပွုနိုငျ, သင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်, အထူးသဖြင့်သင့်ရဲ့ဖောက်သည်! ပြိုင်ဘက်သင်ကူညီနိုငျသညျ့နညျးအခြို့ကိုကြည့်ကြရအောင်: သူတို့ကသင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအလေ့အကျင့်အတွက်ပျင်းရိခြင်းနှင့်အလွန်အမင်းသက်သာဖြစ်လာထံမှသင်တို့တားဆီး. သငျသညျထူးခြားတဲ့ထုတ်ကုန်ရှိပါကဒါဟာလူတိုင်းအတွက်လိုလားကြောင်းကိုသင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ယုံကြည်မှုနှင့်ဖြေလျော့ပေးခြင်းခံစားရရန်လွယ်ကူ. သငျသညျပိုကောင်း yo မှမဆိုဖိအားမခံစားရဘူး ...
အားကစားပြိုင်ပွဲ: Play ဖို့အလွယ်ကူဆုံးသော
Transform your online gaming experience intoafortune. ဒီမှာ, we show you how to use games to makeaprofit.
The business world is now seeing as much as activity on the internet than in the "စစ်မှန်သောကမ္ဘာ". The question is however, how important is it that the smaller businesses in existance have their own websites, is it worth it? Will it help them or will it be more that could be better spent else where?
စီးပွားရေး directory ထဲတွင်ဒေသခံ Advertising ကြော်ငြာ
ပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများစီးပွားရေးလုပ်ငန်း profile များကိုနှင့်ဒေသခံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ directory များမှတဆင့်အွန်လိုင်းကြော်ငြာအားဖြင့်အခွင့်ကောင်းယူနိုငျသောအခွင့်အလမ်းများကိုမီးမောင်းထိုးပြ.
ဘရုစ် Berman Marketing ကို Guru, ဘရုစ်အောင်မြင်မှုရဲ့တစ်ဦးက Berman ရှယ်ယာလမ်းကြောင်းကို
အင်တာနက်ကနေအိမ်ခြံမြေကမ္ဘာကြီးဖို့ကော်ပိုရေးရှင်းဘဏ္ဍာရေး setting ကိုမှ, ဘရုစ်တစ်ဦးက. Berman ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုရရှိအောင်မြင်ခဲ့ပါသည်. ထို့အပြင်သူသည်အခြားသူများနှင့်မိမိအလျှို့ဝှက်ချက်များကိုမျှဝေ. ပြီးတာနဲ့အမည်စာရင်းတင်သွင်း (Sprint တို့က) "Ernst & တစ်နှစ်တာ၏ Young ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်" Berman တစ်ဦးကိုယ့်ကိုယ်ကိုလုပ်သန်းကြွယ်သူဌေးဖြစ်ပါသည်.
အရောင်းတနေ့လုံး Pull ဆိုလိုသည်မှာအဆိုပါ Radar Advertising ကြော်ငြာမဟာဗျူဟာအောက်မှာ!
သင့်ရဲ့ကြော်ငြာမဟာဗျူဟာအတွက် advertorials သုံးပြီး၏တန်ခိုးရှာဖွေတွေ့ရှိ. ဤသည်အဆိုပါရေဒါနည်းဗျူဟာအောက်မှာအတူတူထားအားလုံးသင့်အခြားကြော်ငြာမဟာဗျူဟာများထက် ပို. အရည်အချင်းပြည့်ဝယ်လက်သွင်းနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်. Advertorials ကြော်ငြာသကဲ့သို့သငျဖို့ရည်ရွယ်ချက်ယုံကြည်စိတ်ချရမယ့်ဒီဂရီမှမိမိတို့ကိုယ်ကိုချေး, အဖြစ်တောင်စားသုံးသူများအများဆုံးသံသယဖို့ကြော်ငြာစေးအများဆုံးယုံကြည်အောင်.
လေ့လာချက်: 800 ကြော်ငြာရှင်များနှင့်အတူတိုင်လူကြိုက်များသောနံပါတ်များ
လွန်ခဲ့သောခုနစ်နှစ်ကျော်အင်တာနက်ကြီးထွားနေသော်လည်း, ရုပ်မြင်သံကြားကြော်ငြာများတွင်သေဆုံးသူ-အခမဲ့ဖုန်းနံပါတ်၏အသုံးပြုမှုကိုကြီးထွားဖို့ဆက်လက်, တယ်လီဖုန်းတစ်ပျံ့နှံ့နေတဲ့တုံ့ပြန်မှု tool ကိုဖြစ်နေဆဲကြောင်းညွှန်ပြ, လတ်တလောလေ့လာမှုအရသိရသည်.
အိန်ဂျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအုပ်စုများအစောပိုင်းအဆင့်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်မူလတန်းနာယကအဖြစ်ပိုကောင်းအသိအမှတ်ပြုလေးလည်းရှိပါသည်, လုပ်ငန်းရှင်များအဘို့ပုဂ္ဂလိကရှယ်ယာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီများ၏စက်မှုလုပ်ငန်း-related နှစ်ပတ်လည်စစ်တမ်းများအတွက်ထင်ပေါ်ကျော်ကြားအဆင့်မရရှိစ.
US မှာ, we are familiar with the legends who helped build our country: the Vanderbilts, the Fords, the Rockefellers, နှင့်အခြားသူများ. These were men who hadavision for the country and carried it out to the benefit of all. In Korea,apeasant farmer transformed the nation fromaneedy third world nation into an international powerhouse. Please read on to learn more about Chung Ju-yung, the founder of the Hyundai Group.
စိတ်တိုင်းကျပုံနှိပ်ထုပ်ပိုးတိပ်သင့်တံဆိပ်တပ်သို့မဟုတ်အရောင်းကို Message ပို့နိုင်သ
PRESENTEEISM: နောက်ထပ် Dimension
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Coding: အဆိုပါရီးရဲလ် Story
နွေဦး! ထိုအခါဘယ်လိုသင့်ရဲ့ဥယျာဉ်လော (စီးပွားရေး) တိုးတက်ကြီးပွားခြင်း?
သင့်ရဲ့စီးပွားရေးငွေတောင်းခံလွှာ Factor ဘဏ္ဍာရေးနှင့်အတူကြီးထွားလာ
နည်းပညာအတော်များများအသုံးပြုခြင်းနဲ့ Ultimate ပိတ်စတွေတင်
LG က VX9900 များအတွက်အဆင်ပြေ Cell Phone Chargers
Virtual အကူအညီအတွက်အလုပ်ရှာဖွေရေး Outlook နဲ့
အပိုင်း II ကို – ရှေ့နေချုပ်-လိုင်းကိုက်ညီမှုရှိသည့်န်ဆောင်မှုများမှတစ်ဆင့်ဥပဒေလမ်းတံတားများအတွက်စျေးကွက်
1 / 181234567...နောက်တစ်ခု"နောက်ဆုံး»